Sidee ayuu u shaqeeyaa Tabex?
Tabex waa daawo ka soo horjeedda cabista sigaarka. Fadlan la soco inaysan ahayn daawo nooc kasta ha noqotee hase yeeshe badeecad gebi ahaanba dabiici ah oo ku saleysan dhir laga soosaaray. Waa la iibsan karaa iyada oo aan dhakhtar qorin. Xiisaha adduunka oo dhan ayaa koray sanadihii la soo dhaafay waxtarkiisa awgeed.
Tabex wuxuu saameyn buuxda ku leeyahay hababka cudurada keena ee ku tiirsanaanta nikotiinka:
Daawada 'alkaloid cytisine' waa antagonist awood badan oo leh soo-dhoweynta nikotiinka.
Cytisine wuxuu leeyahay nooc daaweyn ballaaran oo ka badan nikotiinka taas oo ka dhigaysa muuqaalkeeda ficilku mid aamin ah.
Cytisine wuxuu yareeyaa astaamaha murugada leh ee laxiriira joojinta qamriga nikotiinka.
Marka loo barbardhigo nikotiinka, waxay ku leedahay saameyn aad u daciif ah nidaamka neerfaha durugsan iyo cadaadiska dhiigga
Cytisine waa khabiir ku takhasusay cholinoreceptors oo ka socda ganglia daaqsinka wuxuuna ka tirsan yahay kooxda daroogada gangliostimulating. Waxay farxad gelisaa nikotiinta cholinoreceptors-ka xasaasiga ah ee xuubka 'postynaptic membranes' ee ganglia daaqsinka ah, unugyada 'chromaffin cells' ee qeybta molecular ee qanjirka 'suprarenal gland' iyo 'sinocarotid reflexogenic area', taasoo keenta kacsanaanta xarunta neefsashada, inta badan fekerka, jilitaanka adrenaline ee la sii daayo dhinaca medullary ee qanjidhada suprarenal iyo koritaanka cadaadiska dhiigga. Ka dib markay ka nuugto mareenka caloosha iyo mindhicirka, cytisine wuxuu ciyaaraa doorka walaxda beddelka sigaarka taas oo hoos u dhigeysa muddada isdhexgalka u dhexeeya sigaar cabbista iyo soo dhaweynta la midka ah.
Tani waxay marka dambe u horseedaa hoos u dhac tartiib tartiib ah iyo joojinta sigaar cabayaasha iyo qabatinka nikotiinta jirka. Cilmi baarayaal badan ayaa xaqiijinaya tijaabooyin kala duwan oo dawooyin ah oo ku saabsan isku xirnaanta ka dhexeysa astaamaha daawada ee cytisine iyo tubaakada, sida lagu sharraxay Dale & Laidlaw waxaana sidoo kale lagu taageeray gabagabada ah awood xoog leh sida ganglion-kicinta marka loo eego ganglioblocking Zachowsky, Anichkov, Dobrev iyo Paskov, Daleva, iwm. .waxaa ka awood badan sida ganglion-kicinta marka loo eego sida ganglioblocking ay si aad ah uga xoog badan tahay ganglion-kicinta marka loo eego dilalka ganglioblocking. Saamaynta isbarbardhiga ee labada daroogo ayaa lagu helay tijaabooyin ku saabsan sigaar cabista iyo cytisine ayaa aad uga tiro badan tayada. Saamaynta isbarbardhigga ah ee labada daroogo ayaa lagu helay tijaabooyin jiirka iyo bisadaha ah, ama doofaarka guinea ileum iyo rat diaphragm, qiyaasaha cytisine waa 1/4 ilaa 2/3 qiyaasta sigaar cabista. Nidaamka, Cytisine wuxuu leeyahay nidaam neerfaha daciif ah, Cytisine wuxuu leeyahay saameyn daciif ah marka la barbardhigo nidaamka neerfaha.
Sida loo isticmaalo Tabex Daraasado caafimaad oo ku saabsan Tabex Ku saabsan Geedka Laburnum